Tena mendrika ny hasarobidinao!
"Tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny (namonjen'Andriamanitra) antsika." Titosy 3:5
"Tsy amin'ny fahamarinanay no andoaranay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin'ny halehiben'ny indrafonao." Daniela 9:18
Io lohateny io dia dokambarotra fanta-daza momba zavatra iray fikojakojana vatana. Tena nandaitra izy io, ka mampanontany tena ny anton'izany. Satria ve io fiteny io manindrahindra ny fiheveran'ny mpihaino tsirairay ny tenany ho zavatra?
Inona moa ny lanjantsika, raha ny marina? Noarìn'Andriamanitra tahaka ny endriny, araka ny tarehiny, ny olona tsirairay (Genesisy 1:26-27). Izany dia milaza ny maha sarobidy antsika tsirairay, ho Azy. Ny lehilahy tsirairay, ny vehivavy tsirairay, na izay ambany indrindra eo amin'ny fiarahamonina na izay ambony indrindra, dia voatsinjon'Ilay Mpahary azy, voatsinjony manokana. Ary na dia nanjary mpanota avokoa aza isika, noho ny nataon'ireo ray aman-drenintsika tany aloha, dia tsy miova velively Andriamanitra, fa mbola liana amintsika hatrany. Andriamanitra dia fitiavana, koa tsy nahafoana ny fifandraisany amintsika ny ota. Mifanohitra amin'izany aza: "Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy" (Romana 5. 8).
Izao no tokony ho takatsika tsara : tsy noho ny fahamendrehantsika na ny hatsarantsika no maha sarobidy antsika eo imason'Andriamanitra, fa tia antsika amin'izao maha isika antsika izao Izy, satria fotsiny toetrany ny mitia. Na iza isika na iza, dia tiany, na mendri-kaja na ratsy ny fiainantsika tany aloha, dia tsy manova na inona na inona izany!
Aoka isika tsy hihevitra intsony izay lanjantsika -na hamaivanantsika! Ekeo tsotra fotsiny ilay fanomezana mahatalanjona tian'Andriamanitra hatolotra anao, dia ny fitiavany. Manatòna Azy, mba handraisanao ny famelan-keloka omeny sy ny fahasoavany.